#OromoProtests Daily, April 19, 2016 (updated) -
Lixa Wallaggaa Magaalaa Najjoo
Barattootni mana barumsa Aggar Alaltuu waaree booda mormii guddaa gochuun mootummaa bulguun TPLF ajjeechaa fi ukaamsa ilmaan Oromoo irraatti gaggeessaa jiru akka dhabuu fi hidhamttoota siyaasaa Oromo akka gadhiisu fi akkasumattis waraani dhala Oromoo jumlaan fixaa jiru akka Oromiyaa keessaa bahuu karaa nagaan harka qullaa gaafatan. Haata’u malee, akkuma baratanii fi uumama isaannii ta’eetti pooliisii fi Agaaziin humnaatti dhimma bahuun barattoota baayy’ee miidhaniitti jiru oduun nu dhaqabe ni addeessa. Dhimma FXG hardhaan tana deemaa jiru ilaalchiise yoo network quunnamti milkaawe dabalata oduu akkuma argameen maxxansina.
Oromoon biyya isaa ni deeffata.
Hangamillee rakkoon nuutti hedduumaatu qabsoon irra aana.
#‎OromoProtest‬ ebla 19/4/2016 guyyaa har’aa m/b Biiftuu Naqamtee Sadarkaa 2ffaa kan Magaala Naqamteetti argamutti haala yeroon wal qabatee jiru isin mariisifna jechuun Kaabinootni Magaalaa utuu hin hafin mana barumsaa ganama sa’a 2:30 tti deemuun kutaa hunda galuun marii jalqaban . Utuuma mariisisaa jiranii poolisotni mooraa seenuun bakka dhimmi nageenyaa fi itti aanaan kantiibaa jirutti barattoota tumanii yeroo quufan mooraa gad dhiisan.Suurri armaan gadii kun barataa Daawit Mitikuu barataa kutaa 9ffaa B kan poolisootni caccabsanii deemaniidha.barataa Mohammad kan jedhamu immoo dullaan sammuu rukutuun Istaafii jalatti kuffisanii deeman!kun maal mullisa yoo jettan aangoon kanabbaa humna qabuu ta’uusaati!maaliif yoo jedhameef itti gaafatamaan dhimma Nageenyaa fi itti aanaan kantiibaa utuu isaan dhowwanii poolisootni barattoota caccabsanii deeman.
Thousands are in DC to attend the tomorrow’s hearing. Thousands are on the way
TAANE QEE’EE GADDAA
– Source: Beekan Guluma
uff…. Yaa du’a lammii, akkam nama gubaa
Waan taanu wallaallee, teenyee nyaanna qubaa
Maaliif duuti nufixaa? osoo qabnuu dhugaa
Halkan bo’aa buleen guyyaa taa’ee mugaa
Nutoo iyyinee dadhabne, iyya keenya wayyoo
Falli keenya maalumaa? egaa yaa waaqayyoo
Joorre jaawwarrus, keenya jiruun taate kiyyoo
Iyyinee watwaatnus, keenya manni taate biyyoo
Kaan manumatti du’ee, rasaasaan dhahamee
Kaan qaallittiitti du’ee, gidiraan irra gahamee
Kaan jireenya dhabee, osoo jooruu bishaaniin nyaatamee
Kunoo irbaata qurxummii ta’ee, Biyyarraa ariihamee
Halkaniif guyyaa deemanii, garaa qullaa hagabuu
Jooranii jaawwarukaa, see’anii Waan isaaniif darbuu
Rakkinatu isaan joorsaa, kan beeknu namni kamuu
Maali yaa raabbii, maaliif dhugaan keenyi hinargamuu?
Egaa eessuma deemnaa? Lafa deemnu wallaallee
Akkamitti obsinee jiraannaa? Lammii meeqa awwaallee
Eenyumatti himatuu, mee naaf himaa ammallee
Anaanoo na gubee, duutii lammii garmalee
Mirga dhiisanii baqannaan, bitaan duuti itti dhufee
Boolla keessaa olbaanaan, tulluu irratti kufee
Gubbaarraa gad-buunaan, jalaan ibidda itti afuufee
Biyya dhiisanii deemnaan, dooniin gadi gulufee
Hayyoonni maaf teessuu? Ka’aa barbaadaa furmaata
Rakkoo siyaasaa qofaa miti, kan nutti ta’e qormaata
Mee jaarsolii gaafadhaa! safuutu cabee laata?
Mee waaqa araara jedhaa! Waan hunda isatu baata.
Yaa waaq! Nutti araarami, keenya maaliif ta’e addaa?
Lammiinkoo maaliif jooraa? deemee gammoojjiif baddaa
Maalumaa yakkinaan, kan TAANE QEE’EE GADDAA??
–Ammayyuu Rabbirraa Beekanaa